ကိုဗစ်-19 မျိုးကွဲသစ် Omicron ကို တောင်အာဖရိကမှာ စတွေ့ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်း ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီး စိုးရိမ်တကြီး တားမြစ်ကန့်သတ်မူတွေ ကြေညာခဲ့ကြရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်မှာ ကိုဗစ်မျိုးသစ်ကိုတွေ့ပြီး၊ နောက်တစ်နေ့မှာပဲ WHO က စိုးရိမ်စရာအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်အပြီး ကမ္ဘာကြီး တခုလုံးကို အခုလို ရိုက်ခတ်သွားခဲ့တာပါ။ အဓိက စိုးရိမ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ဒီမျိုးကွဲသစ်ဟာ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမူ (Mutation) ကြီးကြီးမားမား ဖြစ်ထားတာကြောင်၊့ ကူးစက်ပြန့်ပွားမူ ဖြစ်စေနိုင်ခြေက (Transmissibility) က အရင်ကူးစက်မှုမြန်ခဲ့တဲ့ Delta မျိုးကွဲသစ်ထက်ကို ပိုများနိုင်တယ်လို့ ယူဆထားပြီးလို့ပါ။ အရင် Delta မျိုးကွဲရဲ့ ကူးစက်မူမြန်နှုန်းနဲ့ပင်၊ ဆေးရုံတက်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ပြီး တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေ မနိုင်မနင်းဖြစ်ကာ၊ လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရတာကြောင့် အခုပိုဆိုးလာနိုင်တာကို အဓိကဆက်ပြီးတော့ စိုးရိမ်လာကြတာပါ။ အမေရိကမှာလည်း Delta မျိုးကွဲသစ် မတိုင်ခင် ပထမ ကိုဗစ်ကူးစက်မူ စစချင်းမှာ သတင်းအချက်အလက် မစုံခဲ့တာကြောင့် ကြိုမပြင်နိုင်ခဲ့ဘဲ၊ အထူးသဖြင့် နယူးယောက်မှာ အလားတူ ဆေးရုံတွေ ဝန်ပိပြီး သေဆုံးမူများခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Delta မျိုးကွဲပေါ်လာချိန်မှာတော့ အစပိုင်းကအခြေအနေကို သင်ခန်းစာယူပြီး နယူးယောက်အပါအဝင် အမေရိကမှာ ကြိုပြင်နိုင်ခဲ့ကာ ခရီးသွားကန့်သတ်မူတွေ အမြန်လုပ်ခဲ့တာကြောင့် ဒီလိုမျိုး သေဆုံးမူတွေကို လျော့ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အခု Omicron မျိုးကွဲသစ်ကိုတော့ တောင်အာဖရိမှာ စတွေ့ခဲ့ပေမဲ့၊ ချက်ချင်း နိုင်ငံပေါင်း (၂၀) ကျော်မှာ ဆက်တွေ့နေပြီး၊ အမေရိကမှာဆို ကနေဒါနိုင်ငံမှာတွေ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ တွေ့ရှိကာ၊ အာရှမှာလည်း ဟောင်ကောင်အထိ တွေ့ရှိထားပြီးပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကပ်နေတဲ့ အရှေ့ တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ ကူးစက်မူ မတွေ့ရသေးပေမဲ့၊ မစစ်နိုင်တာကြောင့် မတွေ့သေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိနေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီမျိုးကွဲသစ်ကို တောင်အာဖရိကမှာ တွေ့တွေ့ချင်း ကူးစက်မြန်တာနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေကို ကူးနိုင်တာအတွက် လူသိရှင်ကြား သတိပေးလိုက်တာကြောင့်၊ မြန်မာအပါအဝင် နိုင်ငံအားလုံးအတွက် အရင်လို ကူးစက်မူအလွန်မြန်နိုင်ပြီး ဆေးရုံတွေ မနိုင်တော့တဲ့အထိ နောက်မကျစေဘဲ ပြင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ အချိန်ရလိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်နေပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် နောက်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့ ဒီမျိုးကွဲသစ်မှာ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းမူ ကြီးမားလွန်းတာကြောင့် ကာကွယ်ဆေးတချို့  အာနိသင်ကျသွားနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာကဲ့သို့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှုန်း နည်းနေသေးတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ အထူးပို သတိထားလုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ အကြောင်းက အခုမျိုးကွဲသစ်ကို စတွေ့တဲ့ တောင်အာဖရိကအပါအဝင် အာဖရိကဒေသတွေမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အထိုးနည်းနေချိန်မှာ အခုလိုစဖြစ်ခဲ့ရပြီး၊ တဘက်မှာလည်း HIV-AIDS ကိုယ်ခံအားကျရောဂါကိုလည်း ထိန်းချုပ်ရခက်နေချိန်နဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပြန်ပါတယ်။ အဓိကကတော့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနဲ့ အခြားဆေးဝါးတွေကို မျှမျှတတ နိုင်ငံတိုင်းမရခဲ့တာရဲ့ အကျိုးဆက်သဘော ဖြစ်နေတယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက သုံးသပ်ထောက်ပြနေပါတယ်။ '
ဒီမျိုးကွဲသစ်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိနားလည်နိုင်ဖို့ ကိုဝင်းမင်းက နယူးယောက်မြို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက အထွေထွေရောဂါဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ညွှန်ကြားရေးမှူးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ကိုဗစ် လူနာတွေကိုလည်း ဖုန်းကတဆင့် ကူညီကုသပေးနေတဲ့၊ ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက် ကို ဆက်သွယ်မေးထားပါတယ်။
ကိုဗဈ-19 မြိုးကှဲသဈ Omicron ကို တောငျအာဖရိကမှာ စတှခေဲ့ပွီး နောကျတဈရကျ နှဈရကျအတှငျး ကမ်ဘာ့ခေါငျးဆောငျကွီးတှေ ကိုယျတိုငျထှကျပွီး စိုးရိမျတကွီး တားမွဈကနျ့သတျမူတှေ ကွညောခဲ့ကွရပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ အပတျမှာ ကိုဗဈမြိုးသဈကိုတှပွေီ့း၊ နောကျတဈနမှေ့ာပဲ WHO က စိုးရိမျစရာအဖွဈ သတျမှတျလိုကျအပွီး ကမ်ဘာကွီး တခုလုံးကို အခုလို ရိုကျခတျသှားခဲ့တာပါ။ အဓိက စိုးရိမျရတဲ့ အကွောငျးရငျးကတော့ ဒီမြိုးကှဲသဈဟာ မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးလဲမူ (Mutation) ကွီးကွီးမားမား ဖွဈထားတာကွောငျ၊့ ကူးစကျပွနျ့ပှားမူ ဖွဈစနေိုငျခွကေ (Transmissibility) က အရငျကူးစကျမှုမွနျခဲ့တဲ့ Delta မြိုးကှဲသဈထကျကို ပိုမြားနိုငျတယျလို့ ယူဆထားပွီးလို့ပါ။ အရငျ Delta မြိုးကှဲရဲ့ ကူးစကျမူမွနျနှုနျးနဲ့ပငျ၊ ဆေးရုံတကျနှုနျး မွငျ့တကျခဲ့ပွီး တခြို့နိုငျငံတှမှော ဆေးရုံဆေးခနျးတှေ မနိုငျမနငျးဖွဈကာ၊ လူပေါငျးမြားစှာ သဆေုံးခဲ့ရတာကွောငျ့ အခုပိုဆိုးလာနိုငျတာကို အဓိကဆကျပွီးတော့ စိုးရိမျလာကွတာပါ။ အမရေိကမှာလညျး Delta မြိုးကှဲသဈ မတိုငျခငျ ပထမ ကိုဗဈကူးစကျမူ စစခငျြးမှာ သတငျးအခကျြအလကျ မစုံခဲ့တာကွောငျ့ ကွိုမပွငျနိုငျခဲ့ဘဲ၊ အထူးသဖွငျ့ နယူးယောကျမှာ အလားတူ ဆေးရုံတှေ ဝနျပိပွီး သဆေုံးမူမြားခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ Delta မြိုးကှဲပျေါလာခြိနျမှာတော့ အစပိုငျးကအခွအေနကေို သငျခနျးစာယူပွီး နယူးယောကျအပါအဝငျ အမရေိကမှာ ကွိုပွငျနိုငျခဲ့ကာ ခရီးသှားကနျ့သတျမူတှေ အမွနျလုပျခဲ့တာကွောငျ့ ဒီလိုမြိုး သဆေုံးမူတှကေို လြော့ခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။
အခု Omicron မြိုးကှဲသဈကိုတော့ တောငျအာဖရိမှာ စတှခေဲ့ပမေဲ့၊ ခကျြခငျြး နိုငျငံပေါငျး (၂၀) ကြျောမှာ ဆကျတှနေ့ပွေီး၊ အမရေိကမှာဆို ကနဒေါနိုငျငံမှာတှပွေီ့း မကွာခငျမှာပဲ တှရှေိ့ကာ၊ အာရှမှာလညျး ဟောငျကောငျအထိ တှရှေိ့ထားပွီးပါပွီ။ မွနျမာနိုငျငံနဲ့ ကပျနတေဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှနိုငျငံတှမှော ကူးစကျမူ မတှရေ့သေးပမေဲ့၊ မစဈနိုငျတာကွောငျ့ မတှသေ့ေးတာလညျး ဖွဈနိုငျခွေ ရှိနပေါတယျ။ တကယျတော့ ဒီမြိုးကှဲသဈကို တောငျအာဖရိကမှာ တှတှေ့ခေ့ငျြး ကူးစကျမွနျတာနဲ့ တခွားနိုငျငံတှကေို ကူးနိုငျတာအတှကျ လူသိရှငျကွား သတိပေးလိုကျတာကွောငျ့၊ မွနျမာအပါအဝငျ နိုငျငံအားလုံးအတှကျ အရငျလို ကူးစကျမူအလှနျမွနျနိုငျပွီး ဆေးရုံတှေ မနိုငျတော့တဲ့အထိ နောကျမကစြဘေဲ ပွငျဆိုငျနိုငျဖို့ အခြိနျရလိုကျတဲ့သဘော ဖွဈနပေါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံအတှကျ နောကျအရေးကွီးတာတဈခုကတော့ ဒီမြိုးကှဲသဈမှာ မြိုးရိုးဗီဇပွောငျးမူ ကွီးမားလှနျးတာကွောငျ့ ကာကှယျဆေးတခြို့ အာနိသငျကသြှားနိုငျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ မွနျမာကဲ့သို့ ကာကှယျဆေးထိုးနှုနျး နညျးနသေေးတဲ့ နိုငျငံတှမှော အထူးပို သတိထားလုပျဖို့ လိုပါတယျ။ အကွောငျးက အခုမြိုးကှဲသဈကို စတှတေဲ့ တောငျအာဖရိကအပါအဝငျ အာဖရိကဒသေတှမှော ကိုဗဈကာကှယျဆေး အထိုးနညျးနခြေိနျမှာ အခုလိုစဖွဈခဲ့ရပွီး၊ တဘကျမှာလညျး HIV-AIDS ကိုယျခံအားကရြောဂါကိုလညျး ထိနျးခြုပျရခကျနခြေိနျနဲ့ တိုကျဆိုငျနပွေနျပါတယျ။ အဓိကကတော့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးနဲ့ အခွားဆေးဝါးတှကေို မြှမြှတတ နိုငျငံတိုငျးမရခဲ့တာရဲ့ အကြိုးဆကျသဘော ဖွဈနတေယျလို့ ကြှမျးကငျြသူတှကေ သုံးသပျထောကျပွနပေါတယျ။ '
ဒီမြိုးကှဲသဈအကွောငျး ပိုမိုသိရှိနားလညျနိုငျဖို့ ကိုဝငျးမငျးက နယူးယောကျမွို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက အထှထှေရေောဂါဆိုငျရာ အစီအစဉျ ညှနျကွားရေးမှူးနဲ့ မွနျမာနိုငျငံက ကိုဗဈ လူနာတှကေိုလညျး ဖုနျးကတဆငျ့ ကူညီကုသပေးနတေဲ့၊ ကူးစကျရောဂါအထူးကု ဒေါကျတာဇယြောသကျ ကို ဆကျသှယျမေးထားပါတယျ။